Qaraxyo Gaadiid looga Gubay Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowladda oo ka dhacay Deegaanka Ceelasha.
Sunday January 06, 2019 - 17:42:23 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo aad u xooggan oo markale duleedka magaalada Muqdisho lagula beegsaday ciidamo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM.
Qaraxyada oo dhacay maanta gelinkii dambe ayaa lala kala eegtay ciidamada shisheeyaha AMISOM iyo kuwa dowladda Federaalka.
Wararka ka imaanaya deegaanka Ceelasha Biyaha ayaa sheegaya in miino dhulka lagu aasay ay ku qaraxday gaari Cabdi Bile ah oo ay la socdeen ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa Melleteriga, goob joogayaal ayaa sheegay in gabi ahaanba uu gubtay gaariga qaraxu haleelay waxaana ku dhintay 2 askari halka tira kale ay ku dhaawacmeen.
Daqiiqado kadib ayuu qarax xooggan haleelay gaari Xamuul ah oo sahay usiday ciidamada Burundi ee saldhigga ku leh deegaanka Arbacoow ee duleedka Muqdisho.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay sheedda sare ka arkayaan qiic iyo uura madoow oo ka dhashay gaadiidka qaraxyadu haleeleen, Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxyadan sida lagu sheegay war kooban oo xarakadu faafisay.
Illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin taliska ciidamada AMISOM iyo dowladda Federaalka oo ku aaddan qaraxyadii galabta ka dhacay deegaannada dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.